PressReader - Kwayedza: 2017-11-10 - ‘Ndaoneswa chitsvuku’
Kwayedza - 2017-11-10 - Nhau Dzemumatare - Lizzy Mushoriwa
VAMWENE vekugara vachioneswa ndondo yekutukirirwa nemuroora wavo achibatsirana nehama dzake vakazopotera kudare redzimhosva vaona kuti zvanyanyisa.
Beater Chinembiri wekuStoneridge, muHarare akamhan’arira muroora wake — Nyarai Jepa — kudare reHarare Civil Court achiti ari kumushura mare. “Changamire, ndauyawo pano nemuroora wangu uyu kuti amiswe kundishungurudza.
‘‘Handisisina rugare, iye nehama dzake vanouya kuzondituka pamba pangu. Izvozvi akasungisa mwana wangu ari kujeri kutaura kuno apa ave kuunza zvikomba pamba pemwana wangu. Zviri ku n dir w ad zaizvozvo ,” va no dar ovamw en ea va.Je pa a no pi ki san an em ashokoavamw en evake ac hi ti :“A mai van on yep a,inih an di tomb ov as hung ur dz eu ye han die ndek um ba kwavo.
‘‘Murume wangu akambotiza kumba akaenda kuna amai vake, ndakangotevera ikoko mwana ar war a .“Am aivak and it indibve pa mb apavov ac hindi ti hap ana chip at a rain indikabv and ichisiy am ur u me ari kumba kwavo.
‘‘ Ha mad zangud zak ap indira dzic hid a ku ti gadzi risa ini nemurume, kwete zvavari kutaura izvi. Murume wacho izvozvi akasungwa, ari kujeri.”
Mutongi akapa Chinembiri gwaro redziviriro.